Uyinika nini ikati ukuba yamkelwe? | Amakati eNoti
UMaria Jose Roldan | | Ukwamkela abanye abantu
Ngamanye amaxesha isigqibo esibi okanye isigqibo esenziwe ngesiquphe sinokugqibela ukuba yingxaki kwixesha elizayo. Xa samkela ikati kufuneka sazi ukuba sisilwanyana, ukuba asinazimvakalelo kuphela kodwa sinokuphila iminyaka engama-20.
Ukuba sifuna ukuba onwabe ngokwenyani, kunyanzelekile ukuba ahlala eyikhumbula le nto, kwaye kufuneka alandele uthotho lokhathalelo. Kodwa kufuneka wenze ntoni xa kuthathwe isigqibo esingalunganga? Okulandelayo ndiza kukuxelela ukuba uyinike nini ikati ukuze yamkelwe.
1 Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni ngaphambi kokuzinikezela ukuba zamkelwe
1.1 Mshiye nonina ade abe neenyanga ezimbini (ubuncinci)
1.2 Musa ukuyishiya endle okanye esitratweni
1.3 Qinisekisa ukuba izakulunga
2 Ngaba ikati yakho ifuna ukufumana ikhaya elitsha?
3 Uncedo lukhona phaya
4 Fumana ikhaya elitsha
Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni ngaphambi kokuzinikezela ukuba zamkelwe
Mshiye nonina ade abe neenyanga ezimbini (ubuncinci)
Ukuba sinekati ethi, nangasiphi na isizathu, khange sifune okanye sikwazi ukuthena Ukhulelwe, Kufuneka uhlale nabantwana bakho ubuncinci de babe neenyanga ezimbini ubudala. Kubaluleke kakhulu ukuba babe kunye ngelo xesha kuba ngale ndlela abantwana baya kufunda ukuba babe kwaye baziphathe ngale ndlela bayiyo: iikati.
Musa ukuyishiya endle okanye esitratweni
Ikati esele ihleli nabantu mancinci amathuba okuba isinde esitalatweni kunale ikhuliswe esitalatweni. Ngokwenyani, ukuba uza kwahlulahlula i-feline, yishiye kwindawo yokufihla intloko apho uyazi ukuba izilwanyana azibingelelwa okanye uzifumanele usapho olutsha kulowo ufuna ngokwenene.
Qinisekisa ukuba izakulunga
Kukho abo bacinga ukuba kuba ikati isencinci okanye intle ayizukuhlala ixesha elide kwindawo yokuhlala, kodwa yimpazamo enkulu leyo. Zonke iindawo zokufihla izilwanyana zizele zizinja kunye neekati, ii-purebreds kunye ne-mongrels ezilinde ukufumana usapho olutsha. Uninzi lwabo alunakuze lwenze. Ke Kuyimfuneko ukuba wazise ngendlela yokusebenza kwelo ziko apho uya kuyishiya khona ikatiEwe, ukuba yeyonyanzelisa kwaye / okanye inezilwanyana kwiikheji ezingacocwanga rhoqo, inja iya kuziva igula kakhulu.
Ngaba ikati yakho ifuna ukufumana ikhaya elitsha?
Zininzi izizathu zokuba kutheni kufuneka ufumane ikati yakho kwikhaya elitsha: ubunzima bezezimali, isimilo esingathandekiyo, ukungahambelani nezinto ezifuywayo ...
Iingxaki ezinxulumene nesilwanyana zinokukhathaza, kwaye unokuziva ngathi ukunikezela isilwanyana sakho sisisombululo kuphela. Kodwa ngaphambi kokuba uthathe elo nyathelo, jonga izixhobo ezikhoyo zokunceda ukusombulula iingxaki ezinokubonakala zinzima ekuqaleni. Elona tyala lilungileyo: awuzukufuneka uhlukane nekati yakho emva kwayo yonke loo nto. Kodwa ukuba uyakwenza oko, iingcebiso zethu zinokukunceda ufumane isilwanyana sakho kwikhaya elitsha elinothando.
Uncedo lukhona phaya
Ngaba unayo ingxaki yokuziphatha kunye nekati yakho? Kusenokungafuneki ukuba uncame isilwanyana sakho sasekhaya. Iingxaki ezininzi zokuziphatha zinokubangelwa yimeko yonyango enokunyangeka. Umzekelo, ikati ezihlangulayo kwibhokisi yenkunkuma ekhaya ingaqala ichame ngaphandle ngenxa yosulelo lomchamo olunokuchongwa ngokulula lunyangwe ngugqirha wezilwanyana.
Ukuba akukho sizathu sibonakalayo sengxaki, khumbula ukuba uninzi lweengxaki zokuziphatha kwezilwanyana eziqhelekileyo zinezisombululo ezilula. Jonga iingcebiso zethu apha ngezantsi okanye uthathele ingqalelo ukudibana neengcali zokuziphatha kwezilwanyana okanye umqeqeshi. Iindawo zokufihla izilwanyana zasekhaya okanye amaqela ohlangulo anokunikezela ngononophelo lwexabiso eliphantsi lwezonyango okanye iinkonzo zoqeqesho okanye Banokukuthumela kweminye imibutho enikezela ngezi nkonzo.
Banokukunceda uthomalalise iikati ezoyikekayo, indlela yokuyeka ukukrwela okanye ukuhlafuna okutshabalalisayo, ukusombulula iingxaki zebhokisi yenkunkuma, ukunceda izilwanyana zasekhaya ukuba zihambelane kunye nokunye.
Iingxaki zekhaya? Kusenokungafuneki ukuba uncame isilwanyana sakho sasekhaya. Ukuba unengxaki yokufumana indawo yokuhlala izilwanyana, okanye uhlangabezana nobunzima bezindlu ezinxulumene nesilwanyana, njengesikhalazo esicaphukisayo, ungaya kwenye indawo apho izilwanyana zamkelweyo.
Ngaba une aleji kwizilwanyana zasekhaya? Kusenokungafuneki uyincame ikati yakho. Unokuthetha nogqirha wakho ukuze ubone ukuba zeziphi iindlela onokuthi ukhethe kuzo nokuba awuchasene nesilwanyana sakho. Kuhlala kukho ezinye iindlela kwaye akusoloko kufuneka wahlukane nazo.
Ngendlela efanayo, ukuba unengxaki yokuhlawula iindleko ezenziwa yikati yakho, awuwedwa. Baninzi abantu abanokufumana ingxaki yemali engalindelekanga. Sukoyika mininzi imibutho kunye nemibutho enokukunceda ngokutya kunye nezinye izinto ezibalulekileyo kukhathalelo lwezilwanyana. Banokukunceda kwaye bakucebise malunga nokuziphatha kunye nokuchitha, kunye nolunye uhlobo lwexabiso eliphantsi okanye ukhathalelo lwezilwanyana lwasimahla.
Ukuba unomntwana ekhaya, akunyanzelekanga ukuba unikezele ngekati yakho kuba naye uyinxalenye yosapho lwakho kwaye unokuba yinxalenye yosapho lwakho olukhulayo olukhuselekileyo, olonwabileyo nolumanyeneyo. Thetha nogqirha wakho ukuba unemibuzo, kodwa akufuneki ulahle ikati yakho ukuze wandise usapho lwakho.
Fumana ikhaya elitsha
Ukuba ucinga ukuba ukunika isilwanyana sakho ukuba sikhathale kokona kulungileyo, gcinani engqondweni ukuba ngaphandle kweyona migudu ilungileyo yokukhusela kunye nokukhusela izilwanyana zabo, ikhaya lakho lihlala liyindawo efanelekileyo yesilwanyana sakho ngelixa ujonga umntu oza kwamkela .
Ngokuthatha umsebenzi wokufumana ikhaya lesilwanyana sakho sasekhaya, unokunciphisa ukhuphiswano lwendawo encinci kunye nezixhobo kwiindawo zokuhlala okanye ukuhlangula. Nazi ezinye iingcebiso zokufumana ikhaya elinothando lesilwanyana sakho sasekhaya:
Yenza isilwanyana sakho sibenomtsalane kwabo banokubamkela. Gcina isilwanyana sakho sigonyiwe kwaye lonke uvavanyo lwezilwanyana lusexesheni. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba isilwanyana sakho siyachaphazeleka okanye asifakwanga neutered njengoko oku kunokubangela ukuba umntu owamkelekileyo enze oko ngokukhawuleza.
Thengisa ngabahlobo, abamelwane, kunye nezilwanyana zalapha ekhaya. Inethiwekhi yakho yobuqu lelona qela lilungileyo labamkeli besilwanyana sakho sasekhaya. Buza ugqirha wezilwanyana ukuba ungabeka ipowusta eyazisa ngemfuno yesilwanyana sasekhaya elitsha. Beka iipowusta ezazisa ngesilwanyana sakho emsebenzini, esikolweni, ecaweni, nakwezinye iindawo zikawonke-wonke oqhele ukuya kuzo. Faka ifoto esemgangathweni esemgangathweni kunye nenkcazo enomtsalane yesilwanyana sakho sasekhaya.
Thatha ithuba lokunxibelelana nabantu. Thumela ifoto yezilwanyana zasekhaya kunye nebali kwaye ubuze abahlobo bakho ukuba babelane ngayo kwinethiwekhi yabo.
Yiba selubala nabantu abanokubamkela. Kuya kufuneka ulungele ukwabelana ngeenkcukacha malunga nobuntu besilwanyana sakho kunye nokuba zihlala njani nezinye izilwanyana kunye nabantu. Yabelana ngezinto ozithandayo zesilwanyana sasekhaya kunye nezinto ezingathandwanga. Kwaye wabelane naziphi na iingxaki zonyango okanye zokuziphatha isilwanyana sakho esihlangabezana naso ukuze abanini abatsha babe nolwazi abanalo ukuze babone ukuba isilwanyana sabo silulungele na usapho lwabo.
Fumana uncedo kumakhaya okhuseleko, imibutho okanye amaqela ohlangulo. Amanye amashishini okhuseleko kunye nohlangulo angathumela iifoto zesilwanyana sasekhaya kunye neprofayile kwiwebhusayithi yazo njengoluhlu olululo, ngelixa isilwanyana sakho sihlala ekhayeni lakho ngelixa ulinde umntu oza kwamkela ukuba angene ebomini bakho.
Njengendawo yokugqibela, unokujika isilwanyana sakho usise kwindawo yokuhlala okanye kwindawo yohlangulo.. Iarhente nganye inokuba nenkqubo eyahlukileyo yokukhulula isilwanyana ukuba sikhathalelwe abanye, kodwa ufumane ulwazi ngokubiza ezi ndawo kuqala okanye ujonge ulwazi kwi-intanethi.
Nokuba ikati incinci okanye indala, kuhlala kukho ukhetho ngaphambi kokuyishiya. Usapho lwakho, ukuba unokuhlala naye uya kuba yeyona nto ilungileyo kuye wonke umntu. Kodwa ukuba awunako nangasiphi na isizathu, UNGANIKI. Mfunele ikhaya elizimisele ukumkhathalela kwaye umnike uthando olumfaneleyo kodwa ongenakumnika lona ngoku. Sisidalwa esiphilayo esifanelwe yimbeko yonke ehlabathini.
Ngaba singakuphepha ukuzahlula kwikati? Kunjalo. Ukwenza oku, kwanele ukwazi kwangaphambili ukuba singamkhathalela na kwaye, xa sele eneenyanga ezintandathu ubudala, simthabathe ukuze athenwe. Kuphela kungoku esinokuthi siphephe ukubandezeleka kweebhiliyoni zeekati.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ukwamkela abanye abantu » Uyinika nini ikati ukuba yamkelwe?
UMilton garcia sitsho
Mholweni !! Molo emva kwemini, ndinemibuzo emibini:
1_ Ngaliphi ixesha emva kokuzalwa kwamantshontsho ndinokuthi ndiwanike ukutya kwekati?
2_ Kutheni ikati yam ngamanye amaxesha idumbile kunye namantshontsho ayo?
Nceda undincede, kuba ndiyaqala ukuba nekati kunye neentsana zayo.
Phendula uMilton Garcia
1.- ngaphezulu okanye ngaphantsi, kwiveki yesithathu ungaqala ukunika ukutya okuthambileyo kweekati.
2.- Ingangumntu omtsha, okanye angaziva enexinzelelo, okanye bubuntu bakhe 🙂
Ngenxa yezizathu zobuqu zokunyanzelwa, iqabane lam kufuneka lamkele iikati zabo ezindala ezi-4 ezindala kodwa ezizolileyo kuba asinakho ukuhlala apho siza kuhlala khona kwaye ndifuna ukwazi ukuba bangasinceda na ekunxibelelaneni neendawo esinokuthi sibathathe kuzo okanye ubashiye ukuze ukwamkelwa den
I-Coronavirus kunye neekati: ngaba banokuhambisa isifo kuwe?